UMnuz SPhiwe Mjwara ongumsunguli we-Amakhosi AC. Isithombe: nosipho mkhize
Uthe: “Ngesikhathi ngisakhula kwakunzima kakhulu ngoba abazali bebe ngasebenzi, phezu kwalokho umama waye qinisekisa ukuthi silala sidlile njengoba waye nabantwana abayisithuba. Yize sasixakekile ekhaya ngazitshela ukuthi akukho okudlula imfundo, ngakho ngafunda ngaze ngaphothula umatikuletsheni eSiphesihle High School. Ngiyabonga kumama owasigqugquzela ngaso sonke isikhathi. Okuhle wukuthi impilo yashintsha ngo-2004 ngesikhathi umama ethola umsebenzi wasemakhishini eKloof,” kusho yena.
Emva kokuba uSphiwe eqale iqembu labafundi ebaqeqeshela ukuba bebe ngaba subathi, yilapho namalungu omphakathi engenele leli qembu.